Online Burma/Myanmar Library | Page9| Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data
Displaying 81 - 90 of 1155
EXECUTIVE SUMMARY: "In recent years, many governments globally
Fish farming (aquaculture) is important to Myanmar’s food security and is developing and
transforming quickly. This study presents findings fromanew field survey of the farmed
fish value chain that is more detailed and broader than any previous study conducted in
Myanmar. Many of our findings are at odds with what we perceive as conventional wisdom
Myanmar National Land Use Policy (English)
Introduction: "1. Myanmar isacountry where the various kinds of ethnic
Myanmar National Land Use Policy - အမျိုးသားမြေအသုံးချမှုမူဝါဒ (Burmese မြန်မာဘာသာ)
၁။ မြန်မာနိုင်ငံသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံတို့ စုပေါင်းနေထိုင်လျှက်ရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး၊ တိုင်းဒေသကြီး ရ ခု၊ ပြည်နယ် ရ ခုနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေတို့တွင် ပြန့်နှံ့နေထိုင်လျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံတော်သည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် တည်ရှိပြီး ပထဝီအနေအထားအရသော်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးအရသော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေးအရသော်လည်းကောင်း အချက်အချာကျသည့်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။